ဆံပငျဖွူတှကေို ဆေးမဆိုးဘဲ ဖုံးကှယျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြား
HomeKnowledgeဆံပငျဖွူတှကေို ဆေးမဆိုးဘဲ ဖုံးကှယျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြား
H June 15, 2021
ဆံပငျဖွူတှဟော အသကျ ၃၀ ကြျောရငျ ပျေါလာတတျကွပါပွီ။ အသကျ ၃၀ မတိုငျခငျ ဆံပငျဖွူတှေ ပေါကျရငျတော့ အရှယျမတိုငျခငျ ဆံပငျဖွူခွငျးလို့ ချေါပါတယျ။ ဆံပငျဖွူတှကေို ဖယျရှားပဈဖို့ အမွနျဆုံးနညျးလမျးကတော့ ဆံပငျဆေးဆိုးတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ရကျသတ်တပတျ အနညျးငယျအတှငျးမှာပဲ ဆံပငျဖွူတှကေ တဈဖနျ ပွနျပေါကျလာဦးမှာပါပဲ။
မယျလနငျဆိုတာ ဆိုးဆေးတဈမြိူးဖွဈပွီး ဆံပငျဆိုးဆေးတှမှော ထညျ့သုံးပါတယျ။ မယျလနငျကို မယျလငျနိုဆိုကျလို့ သိကွတဲ့ အထူးပွုလုပျထားတဲ့ ဆဲလျတှကေနေ ထုတျလုပျပါတယျ။ လူခန်တာကိုယျထဲမှာ မယျလနငျဓာတျ ထုတျလုပျမှု ရပျတနျ့သှားရငျ ဆံပငျတှဖွေူလာပါပွီ။ အသကျအရှယျကွောငျ့ ဒါမှမဟုတျ မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့လညျး ဖွူပါတယျ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျတဲ့ ပုံစံက ဆံပငျဖွူမှုကို မွငျ့တကျစပေါတယျ။
၁။ ဆံပငျခှဲကွောငျးကို ပွောငျးလိုကျပါ။
ဆံပငျဖွူတှကေ နားထငျနဲ့နားသယျစတှမှော ပေါကျတတျပါတယျ။ ဆံပငျဖွူတှကေို ဖုံးအုပျနိုငျဖို့ သငျ့ရဲ့ဆံပငျခှဲကွောငျးပုံကို ပွောငျးလိုကျပါ။ ပိုပွီး ဆနျးဆနျးပွားပွား ဖွဈခငျြရငျတော့ ဆံပငျဖွနျးဆေး၊ ဂယျြ၊ ဆံပငျပုံသှငျးဆေးသုံးပွီး ဆံပငျကို မွှလေိမျမွှကေောကျ ပုံစံခှဲလိုကျပါ။
၂။ ဆံပငျကို ကဈြဆံမွီး ကဈြပါ။
ဆံပငျက ရှညျတယျဆိုရငျ ဆံပငျဖွူတှကေို ကဈြဆံမွီးကဈြပွီး ဖုံးအုပျနိုငျပါတယျ။ အခြိနျပိုပေးနိုငျတယျ ဆိုရငျတော့ ဆံပငျကို ပှယောငျးယောငျးလေးကဈြပွီးရငျ ခေါငျးကိုပွနျပတျလိုကျပါ။
၃။ Accessory လေးတှေ ဝတျဆငျပါ။
ဆံပငျက တိုနတေယျဆိုရငျ ဒါမှမဟုတျ ကဈြဆံမွီး မကဈြခငျြဘူးဆိုရငျ accessory လေးတှသေုံးပါ။ ဆံကုပျလေးတှေ၊ ဆံညှပျလေးတှေ တှယျခွငျးဖွငျ့ ဆံပငျဖွူတှကေို ဖုံးအုပျနိုငျပါတယျ။ ဦးထုပျဆောငျးပွီးတောလညျး ဖုံးလို့ရပါတယျ။ ဘယျရီကတျဦးထုပျက ဆောငျးဦးရာသီမှာ ခတျေစားပါတယျ။
၄။ ဆံပငျ ပှယောငျးယောငျး ဖွဈအောငျလုပျပါ။
ဆံပငျပှယောငျးယောငျးဖွဈနခွေငျးက ဆံပငျဖွူတှကေို ဖုံးအုပျဖို့ အကူအညီပေးနိုငျပါတယျ။ ဆံပငျက အဖြားနားမှာ ကောကျထားလို့ ရပါတယျ။ ဆံပငျကောကျလေးတှေ ပှယောငျးယောငျး ဖွဈနတေယျလို့ထငျရပွီး ဆံပငျဖွူတှကေိုလညျး ဖုံးအုပျပေးထားနိုငျပါတယျ။
၅။ အရောငျပါတဲ့ ဆံပကျဖွနျးဆေးတှကေိုသုံးပါ။
ဆံပငျဖွူတှကေို ဖုံးဖို့ အထိရောကျဆုံး နညျးလမျးကတော့ အရောငျပါတဲ့ ဆံပငျဖွနျးဆေးတှကေို သုံးပါ။ အရောငျပါတဲ့ ဆံပငျဖွနျးဆေးတှကေ ဆံပငျမှာ အကွာကွီးမစှဲပါဘူး။ အခြိနျမရတဲ့အခါမှာ ဆံပငျကို အရောငျတောကျပခငျြရငျ ၊ ဆံပငျဖွူတှကေို ဖုံးခငျြရငျ အရောငျပါတဲ့ ဆံပငျဖွနျးဆေးကို သုံးပါ။
၆။ ဆံပငျဖွူကို ဘယျလိုကာကှယျကွမလဲ? ။ ဆံပငျဖွူတှကေို ဘာတှမေလုပျသငျ့ဘူးလဲ? ။
ဆံပငျဖွူတှကေို မနုတျပဈပါနဲ့။ ဆံပငျတှကေိုနှူတျပဈတဲ့အခါ မှေးညှငျးပေါကျလေးတှကေို ဖကျြဆီးသလို ဖွဈစပေါတယျ။ နောကျဆုံးမှာတော့ ဆံပငျတှထေပျမပေါကျနိုငျတော့ဘဲ ပွောငျသှားပါလိမျ့မယျ။ ဆံပငျမရှိတော့ရငျ ဆံပငျဖွူးတှကေိုလညျး ဖုံးလို့မရတော့ပါဘူး။
အရှယျမတိုငျခငျ ဆံပငျဖွူခွငျးကို ကာကှယျခငျြရငျတော့ သငျ့ရဲ့နထေိုငျမှု ပုံစံကို ပွောငျးလဲသငျ့ပါတယျ။
၂။ တိရစ်ဆာနျတှရေဲ့ အသညျးကိုစားပါ။ အသညျးမှာ ဗျီတာမငျ B12 ပါဝငျပါတယျ။ ဗျီတာမငျ B12 ခြို့တဲ့ရငျ အရှယျမတိုငျခငျ ဆံပငျဖွူတတျပါတယျ။
၃။ စိတျဖိစီးမှုမြားရငျ ဆံပငျဖွူတယျလို့ လူအမြားစုက ထငျကွပါတယျ။ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ ကတော့ ဒီအခကျြက မှနျကနျကွောငျးသကျသပွေနိုငျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ မတှသေ့ေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ စိတျဖိစီးမှုမြားတာက ခန်ဓာကိုယျ ကိုလညျး ထိခိုကျစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ စိတျကိုအေးအေးထားပွီး အသေးအမှားလေးတှဆေိုရငျ စိတျမပူပါနဲ့ ဘာမဆိုပြျောပြျောပဲနပေါ။
ဆံပင်ဖြူတွေကို ဆေးမဆိုးဘဲ ဖုံးကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
ဆံပင်ဖြူတွေဟာ အသက် ၃၀ ကျော်ရင် ပေါ်လာတတ်ကြပါပြီ။ အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူတွေပေါက်ရင်တော့ အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆံပင်ဖြူတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဆံပင်ဆေးဆိုးတာပါ။ ဒါပေမယ့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ဆံပင်ဖြူတွေက တစ်ဖန် ပြန်ပေါက်လာဦးမှာပါပဲ။
မယ်လနင်ဆိုတာ ဆိုးဆေးတစ်မျိူးဖြစ်ပြီး ဆံပင်ဆိုးဆေးတွေမှာ ထည့်သုံးပါတယ်။ မယ်လနင်ကို မယ်လင်နိုဆိုက်လို့ သိကြတဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆဲလ်တွေကနေ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ လူခန္တာကိုယ်ထဲမှာ မယ်လနင်ဓာတ် ထုတ်လုပ်မှု ရပ်တန့်သွားရင် ဆံပင်တွေဖြူလာပါပြီ။ အသက်အရွယ်ကြောင့် ဒါမှမဟုတ် မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်လည်း ဖြူပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ ပုံစံက ဆံပင်ဖြူမှုကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
၁။ ဆံပင်ခွဲကြောင်းကို ပြောင်းလိုက်ပါ။
ဆံပင်ဖြူတွေက နားထင်နဲ့နားသယ်စတွေမှာ ပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဆံပင်ဖြူတွေကို ဖုံးအုပ်နိုင်ဖို့ သင့်ရဲ့ဆံပင်ခွဲကြောင်းပုံကို ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပိုပြီး ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ဆံပင်ဖြန်းဆေး၊ ဂျယ်၊ ဆံပင်ပုံသွင်းဆေးသုံးပြီး ဆံပင်ကို မြွေလိမ်မြွေကောက် ပုံစံခွဲလိုက်ပါ။
၂။ ဆံပင်ကို ကျစ်ဆံမြီး ကျစ်ပါ။
ဆံပင်က ရှည်တယ်ဆိုရင် ဆံပင်ဖြူတွေကို ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပြီး ဖုံးအုပ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ပိုပေးနိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဆံပင်ကို ပွယောင်းယောင်းလေးကျစ်ပြီးရင် ခေါင်းကိုပြန်ပတ်လိုက်ပါ။
၃။ Accessory လေးတွေ ဝတ်ဆင်ပါ။
ဆံပင်က တိုနေတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ကျစ်ဆံမြီး မကျစ်ချင်ဘူးဆိုရင် accessory လေးတွေသုံးပါ။ ဆံကုပ်လေးတွေ၊ ဆံညှပ်လေးတွေ တွယ်ခြင်းဖြင့် ဆံပင်ဖြူတွေကို ဖုံးအုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးထုပ်ဆောင်းပြီးတောလည်း ဖုံးလို့ရပါတယ်။ ဘယ်ရီကတ်ဦးထုပ်က ဆောင်းဦးရာသီမှာ ခေတ်စားပါတယ်။
၄။ ဆံပင် ပွယောင်းယောင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
ဆံပင်ပွယောင်းယောင်းဖြစ်နေခြင်းက ဆံပင်ဖြူတွေကို ဖုံးအုပ်ဖို့ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်က အဖျားနားမှာ ကောက်ထားလို့ ရပါတယ်။ ဆံပင်ကောက်လေးတွေ ပွယောင်းယောင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရပြီး ဆံပင်ဖြူတွေကိုလည်း ဖုံးအုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
၅။ အရောင်ပါတဲ့ ဆံပက်ဖြန်းဆေးတွေကိုသုံးပါ။
ဆံပင်ဖြူတွေကို ဖုံးဖို့ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းကတော့ အရောင်ပါတဲ့ ဆံပင်ဖြန်းဆေးတွေကို သုံးပါ။ အရောင်ပါတဲ့ ဆံပင်ဖြန်းဆေးတွေက ဆံပင်မှာ အကြာကြီးမစွဲပါဘူး။ အချိန်မရတဲ့အခါမှာ ဆံပင်ကို အရောင်တောက်ပချင်ရင် ၊ ဆံပင်ဖြူတွေကို ဖုံးချင်ရင် အရောင်ပါတဲ့ ဆံပင်ဖြန်းဆေးကို သုံးပါ။
၆။ ဆံပင်ဖြူကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ? ။ ဆံပင်ဖြူတွေကို ဘာတွေမလုပ်သင့်ဘူးလဲ? ။
ဆံပင်ဖြူတွေကို မနုတ်ပစ်ပါနဲ့။ ဆံပင်တွေကိုနှူတ်ပစ်တဲ့အခါ မွေးညှင်းပေါက်လေးတွေကို ဖျက်ဆီးသလို ဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆံပင်တွေထပ်မပေါက်နိုင်တော့ဘဲ ပြောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဆံပင်မရှိတော့ရင် ဆံပင်ဖြူးတွေကိုလည်း ဖုံးလို့မရတော့ပါဘူး။
အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူခြင်းကို ကာကွယ်ချင်ရင်တော့ သင့်ရဲ့နေထိုင်မှု ပုံစံကို ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။
၂။ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အသည်းကိုစားပါ။ အသည်းမှာ ဗ်ီတာမင် B12 ပါဝင်ပါတယ်။ ဗ်ီတာမင် B12 ချို့တဲ့ရင် အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူတတ်ပါတယ်။
၃။ စိတ်ဖိစီးမှုများရင် ဆံပင်ဖြူတယ်လို့ လူအများစုက ထင်ကြပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကတော့ ဒီအချက်က မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ မတွေ့သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုများတာက ခန္ဓာကိုယ် ကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီး အသေးအမွှားလေးတွေဆိုရင် စိတ်မပူပါနဲ့ ဘာမဆိုပျော်ပျော်ပဲနေပါ။